दिपक मनाङे प्रचण्ड निवासमा, राजनीतिक घटनाक्रमबारे ‘बृहद् छलफल’ - Himali Patrika
हिमाली पत्रिका ६ असार २०७८, 9:07 pm
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मन्त्री दिपक मनाङेले काठमाडौं आएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटेका छन् ।फेसबुकमा भेटघाटको तस्वीर सार्वजनिक गर्दै उनले ‘पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे बृहद् छलफल भएको’ बताएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा शक्तिशाली मन्त्रालयको बार्गेनिङ गरिरहेका मनाङे त्यसकै लविङका लागि प्रचण्डलाई भेट्न आएको अनुमान गरिएको छ ।गण्डकी मुख्यमन्त्री कृष्ण चन्द्र पोखरेलले मनाङेसहित चार जनालाई मन्त्री नियुक्त गरे पनि कुनै मन्त्रालय दिन सकेका छैनन् ।
११ मन्त्रालयमध्ये शक्तिशाली मानिएको अर्थ मन्त्रालय जसपाले पाउने निधो भइसकेको छ । त्यसपछि आन्तरिक मामला र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि कांग्रेस माओवादी र मनाङे संघर्षमा छन् । प्रचण्डलाई भेट्न मनाङे अर्जेन्टिनाको जर्सी लगाएर खुमलटारस्थित उनको निवासमा पुगेका थिए ।
राजनीतिले दीपक मनाङे जस्ता डनलाई पनि बिगारेरै छाड्यो : सुरेश मानन्धर
आखिर राजनीतिले दीपक मनाङे जस्ता डनलाई पनि बिगारेरै छाड्यो । अहिले भर्खरै गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भन्नुभयो कि दीपक मनाङेले उहाँलाई धोका दियो । शायद होला पनि । अब मुख्यमन्त्री जस्तो मान्छेले भनेको कुरा होइन कसरी भन्ने ?
तर, दीपक मनाङेले धोका दिए भनेको सुन्दा मलाईचाहिँ अचम्म लागेको छ । हामीलाई पनि थाहा छ, दीपक मनाङे नेपालको गुण्डागर्दी क्षेत्रमा लागेको दशकौं भइसक्यो ।
यो क्षेत्रमा उनको आफ्नै खालको प्रतिष्ठा छ । उनले कतिलाई ठोके, कति अपहरण गरे, कति फिरौती मागे त्यो सबैलाई थाहा छ । तर दीपक मनाङेले जतिसुकै अपराधहरू गरे पनि आजसम्म कसैलाई धोका दिए भनेको चाहिँ मैले सुनेको थिइन ।
उनी डरलाग्दा डन भए पनि कसैलाई धोका दिने खालका डनचाहिँ होइनन् तर राजनीतिमा लागेपछि हेर्नोस्, तीनै वर्षमा धोका दिनेजस्ता काम पनि गर्न थाले । के यो उनलाई राजनीतिले बिगारेको होइन ? मात्र तीन वर्षमा एउटा सोझासिधा डनलाई झुत्रै हुने गरी बिगारिदियो ।
मलाई त लाग्छ, गएको तीन दशकसम्म डनगिरी गर्दा पनि नबिग्रेको दीपक मनाङेको इज्जत अहिले राजनीतिमा लागेको यो तीन वर्षमै शून्यमा झर्ला जस्तो छ । गत तीन दशकमा नभएको बदनामी अब यो तीन वर्षमा होला जस्तो छ । बिचरा !